To enhance e-Government
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရဌာနများအားလုံး တစ်ပြေးညီ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပေးသော
Government Personal Management System(GPMS)
Civil Service ID Management System(CSMS)
အစရှိသည့် e-Government Common Application စနစ်များအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရဌာနများ အသီးသီးမှ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များအား အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ရန် အတွက် Server Co-location ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်နိုင်ရန်
Server Co-location အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ Server Co-location ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုသည့် အစိုးရဗဟိုရုံးများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ အနေဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ e-Government ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်(သို့) On-line မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၂။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ Server Co-location Service Request Form အား ဖြည့်စွက်ပေးပို့ရပါမည်။
၃။ Public IP Address အသုံးပြုလိုပါက Public IPv4 Address Service Request Form အား ဖြည့်စွက်ပေးပို့ရ ပါမည်။
၄။ လျှောက်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုအား ပေးအပ်နိုင်ခြင်း (Feasible) ရှိ/မရှိ အကြောင်း ပြန်ကြားပါမည်။
၅။ Feasible ရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများအတိုင်း စီမံ/ဘဏ္ဍာ ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂)၊ နေပြည်တော်တွင် ကျသင့်ငွေ ပေးသွင်းပြီး AN (Advice Note) အားထုတ်ပေးပါမည်။
၆။ AN နှင့် Service Request Form များအား တစ်ပါတည်းယူဆောင်၍ Co-location Data Center e-Government ဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးရုံး(ဗဟိုမီးသတ်အနီး)၊ နေပြည်တော် သို့ ဆက်သွယ်၍ Server Co-location လာရောက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
Share Rack ( up to 6U ) - 90,000 MMK
Half Rack -300,000 MMK
Full Rack - 550,000 MMK
Additional Shelf Space ( 1 U ) - 15,000 MMK
We sent the password reset link for you to your email address: . Get link in your mail.
Reset password failed: Invalid email address